फेसबुक Archives - Living with ICT
Home / Tag Archives: फेसबुक
अब फेसबुकमा ‘अफलाइन भिडियो’ सुविधा, इन्टरनेट नहुँदा पनि भिडियो हेर्न सकिने
युट्युबमा मात्रै होइन, अब फेसबुकमा पनि ‘अफलाइन भिडियो’ सुविधा आएको छ । फेसबुकले इन्टरनेटको सुविधा नाभएको बेलामा पनि फेसबुकका भिडियो हेर्न सकिने सुविधा ल्याएको हो । यसका लागि फेसबुकको नयाँ भर्सनको एन्ड्रोइड एपमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यसका लागि युट्युबमा जस्तै इन्टरनेट भएको समयमा भिडियो अफलाइन भ्युका लागि सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो एपभित्रको सेभ्ड सेक्सनमा हुन्छ। यसरी सेभ गरिएका भिडियो …
फेसबुकले हटायो पोक र क्यामेरा
फेसबुक चलाउँदा तपाइले साथीलाई कहिल्यै पोक गर्नुभएको छ ? या फेसबुकले दिएको क्यामेरा एपबाट धेरैफोटो एक पटक क्लिक गरेर प्रोफाइल अपलोड गर्नुभएको छ ? यदि याे सुविधा लिइरहनु भएकाे थियाे भने फेसबुकले यी एपहरु एपस्टोरबाट हटाइदिएको छ । फेसबुकले यी एप हटाउनुमा स्पष्ट कारण देखाएको छैन । तर प्रयोगकर्ताले खासै मन पराउन नसकेकाले एपस्टोरबाट पोक म्यासेजिङ एप र र क्यामेरा …
फेसबुकले प्रयोगकर्ताका लागि नयाँ ‘सेभ फिचर’ ल्याउदै
काठमाडौ। पछिल्लो समय विश्वभर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आवद्ध हुनेहरुको संख्या ह्‍वात्तै बढेको छ। फेसबुक प्रयोगकर्ता बढेसँगै तपाईले आफ्नो फेसबुकमा कुनै समाचारको लिंक, तस्वीर, गीत लगायतका महत्वपूर्ण समाग्री भेटनुभयो भने लिंक सुरक्षित राख्नेबाहेक त्यसलाई सेभ गरेर राख्ने अरु सजिलो उपाय छैन्। तर, अब फेसबुकले प्रयोगकर्तालाई सहज बनाउनका लागि तपाइले फेसबुकमा भेटेको, खोजेको कुरा फेसबुकमै सेभ गर्ने गरी नयाँ फिचर ल्याउने भएको …
फेसबुकले किन्यो भर्चुअल वर्ल्ड
एजेन्सी। विश्वभर निकै चर्चित बनेका सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले भर्चुअल रियालीटी कम्पनी ओकुलस भीआरलाई किनेको छ। भर्चुलअल रियालिटीको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको यो कम्पनीले फेसबुकलाई आफ्नो कम्पनी २ वियलियन डलरमा बेचेको हो। फेसबुकका अनुसार यसको कुल रकम मध्ये ४ सय मिलियन डलर क्यास र २३.१ मिलियन शेयरमा दिने गरी खरिद गरेको हो। फेसबुकका सिइओ मार्क जुगरबर्कका अनुसार (ओकुलस भीआर) कम्पनीलाइ बुधबार …
फेसबुकको दशौ वार्षिक उत्सव, यस्तो रह्यो १० वर्षे यात्रा (फोटोफिचर सहित)
विश्वमा तेस्रो सर्वाधिक चर्चामा रहेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको आज १० औ वार्षिक उत्सव। सन् २००४ मा आजकै दिन फेसबुकका जन्मदाता मार्क जुकरवर्गले हारवर्ड युनिभर्सिटीबाट फेसबुककलाइ अनौपचारिक रुपमा सुरुवात गरेका थिए। जसको नाम द फेसबुक राखिएको थियो। सन् २००४ देखि अहिले २०१४ को सुरुवातसम्म वेव र मोवाइलमा गरी फेसबुकका १२ करोड ३० लाख भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरु रहेका छन। सर्वाधिक चर्चामा रहेको …